Manao Yoga i Sivananda. Tsy tia misotro ronono na mihinana voankazo, ary matetika no matory tsy mihinana na mandry fotsy tamin’ny fahazazany, raha ny filazany. Vary, « lentille », miampy rony tsy misy hanitra fa arahina sakay maitso no fihinany.
Tamin’ny 2016 izy no efa nisy nampahafantatra mba ho soratana amin’ny boky mirakitra ireo zava-mahagaga erantany na Guinness, saingy noho ny fahasarotana amin’ny fanaporofoana ny tena datinandro nahaterahany dia tsy mbola voarakitra ao ny anaran’i Sivananda.
Hatreto dia mbola ilay Frantsay vavy Jeanne Louise Calment, no voamarina fa ela velona indrindra. Niaina 122 taona sy 164 andro izy. Ny zokiolona mbola velonaina koa dia vehivavy teratany japoney, Kane Tanaka teraka tamin’ny 2 janoary 1903, izany hoe 116 taona mahery.